Faa'iidooyinkayaga - Aojie Mold Co., Ltd.
1. Shirkaddu waxay leedahay koox R&D iyo koox wax soo saar leh, qalab wax soo saar oo horumarsan, tikniyoolajiyadda naqshadaynta caaryada oo aad u fiican iyo teknolojiyadda wax soo saarka caaryada oo aad u fiican. Gaar ahaan caaryada daruuriga ah ee maalinlaha ah, wasakhaha derbiga khafiifka ah, iyo caaryada isku laabma. Shirkadu waxay qaadataa qaab maamul casri ah si ay macaamiisha u siiso adeegyo dhammeystiran oo tayo sare leh. Iyo u hoggaansanaanta fikradda ah siinta macaamiisha xallinta naqshadaynta caaryada ugu fiican uguna welwelka badan. Badeecadaha waxaa lagu iibiyaa dibedda waxayna ku guuleysteen kalsoonida iyo aqoonsiga macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.
2. Iyada oo ku saleysan fikradda ah in la noqdo xirfadle, la safeeyey oo xoog leh, shirkaddu waxay sii wadi doontaa hal -abuurnimada iyo hagaajinta dadka xirfadleyda ah si ay u sameeyaan waxyaabo xirfadeed iyo nidaamka maareynta xirfadeed oo ah aasaaska. Si joogto ah ugu dhis Aojie Mold si aad u noqoto naqshad caag caag ah oo xirfad leh iyo shirkad wax soo saar!
3. Aynu fahamno baahiyahaaga. Ku siiyaan adeegga ugu fiican ee tiknoolajiyadda wax lagu caageeyo. Waan dhagaysan doonaa dhibaato kasta oo farsamo. Ku dadaal inaad noqoto wakiilkaaga caaryada ah. Waxaan fiiro gaar ah u siineynaa faahfaahinta waxaanan galbinaa caaryada. Waxaan fiiro gaar ah u siineynaa tayada oo waxaan ku durnaa nolosha qaabab. Waxaan qiimeyneynaa natiijooyinka waxaanan ku siinnaa qaabab aan walwal lahayn.
4. Jawaab degdeg ah: ballanqaad in aan ku siin doono tilmaamo xigasho oo faahfaahsan iyo macluumaadka alaabta waqtiga ugu dhaqsaha badan; ballanqaad inaad ku habeyneyso alaabta aad u baahan tahay waqtiga ugu gaaban; kuu ballan qaadaya inay kuu samayn doonaan qorshaha miisaaniyadda ee ugu fiican qiimaha ugu habboon.
5. Badeecado iyo qiimayaal tayo sare leh: Shirkaddayadu waxay soo iibsataa alaab ceeriin oo kala duwan oo soo saarta waxayna soo iibsataa alaabo kala duwan oo ceyriin ah si aad u badan si loo yareeyo kharashaadka shirkadda, lana hubiyo in badeecaduhu yihiin kuwo tayo sare leh oo qiimahoodu hooseeyo, si waxtar lehna uga faa’iidaysta ee baaxadda shirkadeena Ku habboon macaamiisha